Kuthunyelwa imiyalezo yocansi ngaphansi koMthetho waseNgilandi, eWales naseNyakatho Ireland - Isisekelo Semivuzo
Ikhaya Kuthunyelwa imiyalezo yocansi ngaphansi koMthetho waseNgilandi, Wales naseNyakatho Ireland
“Ukuthumelelana imiyalezo yocansi” akulona igama elisemthethweni, kodwa elisetshenziswa izifundiswa kanye nezintatheli. Kodwa-ke kungaba nemiphumela emibi kakhulu yezomthetho kulabo abahlanganyela kuyo, ikakhulukazi izingane, ezikubona njengokudlala ngothando olungenabungozi. Amaphoyisa anazo zonke izimiso zomthetho wobulelesi angabekwa icala ngazo. Bona ishadi ngenhla ngezibonelo ezimbalwa. Ucwaningo kukhombisa ukuthi ukusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile njalo kukhuthaza ukuthumelelana imiyalezo yocansi kanye nokuthumela imiyalezo kuyi-Internet, ikakhulukazi kubafana.
Phakathi konyaka we-2016 nowe-2019, izingane ezingaphezu kuka-6,000 ezingaphansi kweminyaka engu-14 zaphenywa ngamaphoyisa ngenxa yokuthunyelwa kwemiyalezo yocansi, kubandakanya nabangaphezulu kuka-300 bezikole zamabanga aphansi. Lokhu esihlokweni ephephandabeni i-Guardian liqokomisa ezinye izingqinamba.
Umthetho Wezokuxhumana 2003 usebenza e-UK yonke. Kodwa-ke amanye amacala ahlobene nokuthunyelwa kwemiyalezo yocansi azoshushiswa ngaphansi kwemithetho ehlukene eNgilandi, Wales naseNyakatho Ireland kanye Scotland. Ukukhiqiza, ukuba nezithombe ezihlanzekile zezingane (abantu abangaphansi kweminyaka engu-18) noma ngaphandle kwemvume yabo, empeleni, akukho emthethweni ngaphansi komthetho. Bona ngenhla ngemithetho ejwayelekile kakhulu yemithetho yobugebengu esetshenzisiwe
Ukuthola noma ukuqoqa izithombe ezithunyelwe nge-imeyli noma amavidiyo efonini noma kwikhompyutha
Uma wena, noma umuntu omaziyo, enezithombe ezingekho emthethweni noma amavidiyo omuntu oneminyaka engaphansi kwengu-18, ubuyobe enesithombe esibi sengane noma ngabe ineminyaka efanayo. Lokhu kuphambene nesigaba se-160 se Umthetho woBulungiswa bezobugebengu 1988 nesigaba se-1 Umthetho Wokuvikela Izingane 1978. ICrown Prosecution Services izoqhubeka nokuqulwa kwamacala ezimweni lapho icabanga ukuthi kuzuzisa umphakathi ukwenza lokho. Bazobheka iminyaka nobunjani bobudlelwano babantu abathintekayo. Uma izithombe zithunyelwa ku-inthanethi ngaphandle kwemvume futhi ngenhloso yokululaza noma ukudala usizi, lokho kuthathwa njenge 'revenge porn' futhi kuzokhokhiswa ngaphansi Umthetho Wobulungiswa Bobugebengu wezi-2015 Isigaba 33, echibini lapha ukuthola umhlahlandlela wokushushiswa eNgilandi naseWales.
Kuthunyelwa izithombe zevidiyo noma amavidiyo
Uma ingane yakho ingaphansi kweminyaka eyi-18 futhi ithumela, ilayisha noma idlulisela izithombe ezingekho emthethweni noma amavidiyo kubangani noma isoka / izintombi, lokho kungaphula nesigaba 1 soMthetho Wezokuvikelwa Kwezingane 1978. Noma ngabe ziyizithombe zakhe noma yena, lokho kuziphatha kwakha 'ukusabalalisa' izithombe ezingafanele zezingane.
Nakhu okuhle kakhulu Isinyathelo ngesinyathelo umhlahlandlela ekuthumeleni imiyalezo yocansi yi-Youth Justice Legal Center. Ngokusho kwalokhu I-College of Police Brunching iphepha, “Intsha ekhiqize izithombe zocansi ingaqala ngokwabelana ngokuvumelana kuya ekuxhashazweni. Ukuthumelelana imiyalezo evuma ocansini akuvamisile ukuheha ukunakwa ngamaphoyisa. Uphenyo lobugebengu nokushushiswa kwamacala ezithombe abhalwe kulesi sithangami kuzofaneleka uma kukhona izinto ezihlukumezayo ezifana nokuxhashazwa, ukuphoqelelwa, isisusa senzuzo noma abantu abadala njengabenzi bokubi njengoba lokhu kungadala Ukuhlukunyezwa Kwezingane Ngokocansi (CSA). ”
Okukhathaza kakhulu ukuthi ngisho nokuxoxwa namaphoyisa kuzoholela ekutheni umuntu osemncane aqoshwe kwiDatabase Lezempilo Lasemaphoyiseni. Leli qiniso lingavela kumasheke wokuqashwa ngokuzayo uma umuntu edinga ukufaka isicelo sokudalulwa esithuthukisiwe. Kuzobuye kuboniswe amasheke omsebenzi owenziwa ngokuzithandela nabantu abasengozini, izingane noma asebekhulile.
Amaphoyisa aseKent athe nawo ayacubungula ukushaja umzali njengomuntu obhekele inkontileka ye-smartphone ethumele isithombe / ividiyo eyonile.